डरलाग्दो घटनाको पर्दाफास ! आफ्नै जुठाजुले गरे बुहारी अञ्जनाको हत्या !( हेर्नुस भिडियो ) – Nepal Trending
डरलाग्दो घटनाको पर्दाफास ! आफ्नै जुठाजुले गरे बुहारी अञ्जनाको हत्या !( हेर्नुस भिडियो )
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाको ढोलाहिटीमा जेठाजुद्वारा बुहारीको हत्या भएको छ । संयुक्त परिवारमा बस्दै आएका डोलाहिटीका जेठाजु उज्वल महतले भाइ बुहारी अञ्जनालाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका हुन् । पानीको हाहाकार हुने ढोलाहिटीमा घरका सदस्यहरु पानी लिन गएको तथा बुहारी अञ्जना मात्रै घरमा भएको मौका पारी जेठाजु उज्वलले खुकुरी प्रहारी गरी हत्या गरेका हुन् ।
माथिल्लो तल्लाबाट अनौठो आवाज आएपछि भाडामा बस्ने एक महिला हेर्न जाँदा अञ्जनाको हत्या भइसकेको थियो । प्रत्यक्षदर्शी ति महिलाका अनुसार रगतले लत्पतिएको कपडा र रगतको छिर्काले भरिएको अनुहारसहित हत्यारा उज्वल बरण्डामा बसिरहेका थिए ।
स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि तुरुन्तै घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले खुकुरी लिएर बसेको अवस्थामा हत्यारा उज्वललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरिरहेको छ । घटनास्थलबाट दुई थान खुकुरी तथा क्षतविक्षत अवस्थामा अञ्जनाको शव फेला परेकाे थियाे । अञ्जनाका औंलाहरू छिनालिएकाे अवस्थामा भेटिएकाे प्रहरीले जनाएको छ ।
मृतक अञ्जनाको शव पोष्टमार्टमका लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगनखेलमा राखिएको छ । ब्युटी पार्लर चलाउने अञ्जना पार्लर बिक्री गरी क्यानडा जाने तयारीमा रहेकी पारिवारीक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पेशाले संगीतकार रहेका हत्यारा उज्वललाई केही सयमदेखि मानसिक रुपमा समस्या देखिएको र अस्वभाविक गतिविधि गर्न थालेपछि झारफुकका लागि झाँक्रीकोमासमेत लगिएको पारिवारीक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।
घटनामा उज्वलको संलग्नता भएको र कानुनी कारवाही गर्न माग गर्दै अञ्जनाका पिता गणेशबहादुर लामा र उज्वलका नातामा काका पर्ने शिवराम महतले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला अदालत ललितपुरबाट पाँचदिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ ।अञ्जनाको विवाह पाँच वर्ष अघि उज्वलको भाइ प्रज्वलसँग भएको थियो ।
गलबन्दी गर्ल अन्जली अचानक प्रहरीमा भर्ना, यसरी पोखिन दुख ( भिडियो सहित )
यी आमाले आफू लडेर यसरी बच्चाको ज्यान बचाइन (भिडियो हेर्नुस)
प्रकाश सपुतसँग शम्भु राईको डिमाण्ड ! अब म छोडदिन, ठुलो दुर्घटना हुन्छ …..(भिडियो…
रबि लामिछानेकै अगाडि इटहरीका मेयरले भने एक एक पत्रकारलाई छानि छानि ठोक्छु ( भिडियो…
दरबार हत्याकाण्डको १८ वर्ष पुरा ! राजा बिरेन्द्रको एेतिहासिक सम्बोधन हेर्नुस ( भिडियो…
गलबन्दी” लाई आयो नयाँ शब्दमा ९ बर्षका बच्चाले दिए यस्तो कडा जवाफ… ( हेर्नुस भिडियो )